स्वास्थ्य सेवा नरोक | चितवन पोष्ट दैनिक
स्वास्थ्य सेवा नरोक
२०७० माघ ६, सोमबार ०३:१४ गते
आस्था, दृढता र सत्यका प्रतिमूर्तिका रुपमा चिनिने र मानवताका पूजारी मानिएका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अनियमितता हटाउने माग राखेर आमरण अनशन जारी राखेका छन् । उनले संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्न, निजी मेडिकल कलेजहरुलाई अनुगमन नगरी सम्बन्धन नदिन तथा क्षमता, अनुभव र स्तरीयताका आधारमा डिन नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायत सातवटा माग राखी आन्दोलनस्वरुप अनशन थालेको पनि आज आठ दिन भइसकेको छ । अहिले देशभरका चिकित्सक तथा विभिन्न पेसागत संघसंगठनहरुले डा. केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । डाक्टरहरुको संस्था नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पनि आइतबारदेखि देशभर स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बिरामीको खोजी गरेर स्वास्थ्य सेवा दिने डा. केसीकोे मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु र संस्थानको बेथिति सुधार्न सबै क्षेत्रबाट दबाब दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, स्वास्थ्यजस्तो आकस्मिक सेवा ठप्प पार्दा बिरामीको ज्यानै जान सक्ने भयावह अवस्थाबारे नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
सरकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारीको संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका लागि देशभरका बिरामीहरुलाई सजाय दिनु न्यायोचित नहुने मात्र होइन, चिकित्सा पेसाविपरीत कार्य हो । डा. केसीले उठाएका मागहरु जायज छन् । र, उनले व्यक्तिगत लाभ र चर्चाका लागि पनि आमरण अनशन रोजेका होइनन् । सादगी र मानवीय सेवामा समर्पित डा. केसीले नेपाली जनताका लागि आन्दोलन गरेका हुन् । चिकित्सा क्षेत्रमा बढ्दै गएको माफियातन्त्र र आर्थिक चलखेलविरूद्ध जेहाद छेड्दै स्थापित गलत संस्कार हटाउन उनले स्वतःस्र्फूत आन्दोलन रोजेका हुन् । यसअघि पनि दुई पटकसम्म आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीको माग तत्कालीन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । र, उनले फेरि आफ्नो प्राणको बाजी लगाइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले डा. केसीको अनशनप्रति उपेक्षा गरे उसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । देशभरका चिकित्सकहरु मात्र होइन, न्याय र अहिंसाका हिमायतीहरु आन्दोलनमा होमिन थालिसकेका छन् ।
डाक्टरहरुले स्वास्थ्य सेवा ठप्प बनाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन । सडक संघर्ष गर्ने काम राजनीतिक दलहरुको हो । बिरामीले उपचार सेवा पाउनु उनीहरुको नागरिक अधिकार हो । जनताको अधिकार रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण लडाइँ लडिरहेका डा. केसीको समर्थनमा नागरिक समाज मूकदर्शक बन्नुहुँदैन । उनको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै देशभरबाट सरकार तथा त्रिवि पदाधिकारीविरूद्ध दबाब दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प देखिएको छ । मेडिकल एसोसिएसनले उपचार सेवा रोक्ने निर्णय फिर्ता लिएर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा बन्द भयो भने जनताले त्यसको विरोध गर्ने अवस्था आउँछ, जसका कारण डा. केसीको जनसमर्थन र सद्भाव घटाउने हतियार बन्न पनि सक्छ । स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीले त सास्ती पाउँछन् नै, डा. केसीले उठाएका माग पूरा हुन समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । तसर्थ, डाक्टरहरुले स्वास्थ्य सेवा सुचारू गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै केसीको मागप्रति समर्पित हुनु जरूरी छ ।